I-Raw Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Abakhiqizi - Phcoker
I-Lorcaserin hydrochloride powder iyinhlangano ye-serotonin 2C (5-HT2C) ye-receptor agonist kanye nemithi yokwelashwa ngomlomo ekhuthaza ....
Umthamo: 1380kg / inyanga
I-Raw Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) ividiyo
I-Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Imininingwane
Igama Product I-Lorcaserin Hydrochloride powder
Igama leKhemikhali I-Lorcaserin HCL powder, Lorcaserin
Brand NAme I-BELVIQ
I-Drug Class I-5-HT2C i-receptor inhibitor
CAS Inombolo 846589-98-8
I-molecular Fi-ormula C11H15Cl2N
I-molecular Weziyisishiyagalombili 232.15
IMisa ye-Monoisotopic 231.058154899
Ukuxuba Pi-oint Ayikho idatha etholakalayo
Fukuvuselela kabusha Pi-oint Ayikho idatha etholakalayo
I-Half Half-Life I-half-life ye-lorcaserin cishe amahora angu-11.I-powcaserin powder iqedwa ngokuyinhloko emcinini (92%) nasendlini (2.2%)
Color powder emhlophe
solubility Umswakama wamanzi: 0.0709 mg / mL
Storage Tukushisa -20 ° C.
Aukuphikisana I-Serotonin 2C (HT2C) ye-receptor agonist yokunciphisa isisindo.Iyakudliwa ukusetshenziswa kokudla futhi ikhuthaza ukuzithokozisa phakathi
I-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Incazelo
I-Lorcaserin hydrochloride powder i-hydrochloride etholakala ngokuphendula i-lorcaserin powder ene-hydrochloric acid efanayo. Isetshenziswa njengesidakamizwa sokulwa nokukhuluphala ngokweqile. I-Lorcaserin hydrochloride iyinhlangano ye-agonist ye-5HT2c eboniswe ukusetshenziswa kubantu abadala abane-BMI ≥30, noma labo abane-BMI ≥27 futhi okungenani isimo esihlobene nesisindo esifana ne-hypertension, uhlobo lwe-2 sikashukela noma i-dyslipidemia.Lolcaserin Hydrochloride powder isebenza ngokunciphisa ukudla kudala umuzwa wokuzizwa, futhi kucatshangwa ukuthi ugweme ukushisa kwesifo senhliziyo ye-valvular ehambisana nokusebenza kwe-receptors ye-5-HT2B, indawo yobuchopho eyaziwa ukuthi idlala indima enkulu ekulawuleni indlala nokudla ukudla. Ngokusebenzisa lezi zitholampilo, i-Lorcaserin hydrochloride powder inganciphisa ukusetshenziswa kokudla ngokunciphisa ukudla futhi kwenza umuntu azizwe egcwele ngisho nangemva kokudla ukudla okuncane kunokujwayelekile. ivunyiwe namhlanje yi-FDA ngesinqumo esimangalisayo ngemuva kweminyaka engu-2 yokuhlolisisa.
I-Lorcaserin hydrochloride powder iboniswe ngokucacile njengendlela yokudla okunciphisa ukudla kwekhalori kanye nokwenyuka komzimba okwenziwe ukuphathwa kwesisindo esingapheliyo kubantu abadala abadala (BMI ye-30 kg / m2 noma ngaphezulu) nabantu abadala (overnight weight) (BMI ye-27 kg / m2 noma ngaphezulu) okungenani nesimo esisodwa se-comorbid esihlobene nesisindo.
I-Lorcaserin hydrochloride powder isetshenziselwa kanye nokudla nokuzivocavoca ukwelapha ukukhuluphala. Ngezinye izikhathi kusetshenziselwa ukuphatha ukukhuluphala okungase kuhlobene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu, noma ukucindezelwa kwegazi eliphezulu.
I-Lorcaserin hydrochloride ngeke iphathe noma yiziphi izimo zempilo ezingaphansi (ezifana nesifo senhliziyo, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophezulu). Qhubeka uthatha noma yiziphi ezinye izidakamizwa udokotela wakho anikezele ukuphatha lezi zimo.
I-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Indlela Yokusebenza
Yize noma indlela ecacile engaziwa, kucatshangwa ukuthi ihilela ukusebenza okukhethiwe kwe-5-HT2C receptors kuma-neuron anorexigenic pro-opiomelanocortin e-nucleus e-arcuate ye-hypothalamus. Lokhu kubangela ukwehla kokudla nokudla okunciphisa ngokukhuthaza ukukhululwa kwe-alpha-melanocortin evuselela i-hormone, eyenzeka kuma-receptors ama-melanocortin.
I-Lorcaserin hydrochloride powder isebenza ngokulawula ukudla - ikakhulukazi ngokusungula ama-receptor ebuchosheni nge-serotonin, i-neurotransmitter edala imizwa yokukhathazeka nokwaneliseka. Ukutholakala kokudla kulawulwa isikhungo satiety, esivela ku-nucleus ye-ventromedial hypothalamus kanye nesikhungo selambile esivela ku-hypothalamus yangemuva. Iziphakamiso ezihlukahlukene ezivela ezikhungweni eziphakeme kanye namapheshana omathunjini ziguqula ukuguqula i-nucleus, lapho kunezinhlobo ezimbili ze-neurons ezilawula ukudla okukhona. Okokuqala, iqembu lokuvuselela ukudla likhiqiza amaprotheni ahlobene ne-agouti ne-neuropeptide Y; futhi okwesibili, iqembu lokudla lokuvimbela ukudla eliqukethe i-cocaine ne-amphetamine lilawulwa ngokubhalwe phansi (CART) ne-pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. I-POM iqukethe i-5-HT 2C receptors, okuyinto lapho kusebenzwa kukhishwa i-alpha-melanocyte-stimulating hormone (alfa-MSH) .Iziphetho ezingavimbelayo nezishukumisayo ziqhubeka nezinhlelo ze-nucleus ezibonakalayo ku-hypothalamus. I-nucleus ehamba phambili iqukethe i-melanocyte receptors ye-4 (MC4R) evimbela ukufisa emithonjeni yokwelapha i-lorcaserin hydrochloride powder njenge-5-HT 2C agonist ekhethiwe kwi-POMC neurons, okuholela ekukhululweni kwe-alfa MSH. I-alfa e-MSH eqhubekayo isebenza nge-MC4R ekwakhiweni kwe-hypothalamus, okuholela ekwehleni kwesifiso. Emithini ye-supratherapeutic, i-lorcaserin hydrochlorider nayo isebenza kwi-5-HT 2B kanye ne-5-HT 2A receptors.
Izinzuzo we-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8)
I-Lorcaserin HCL powder iyisifo se-5-HT2C se-receptor agonist esicatshangelwa ukunciphisa ukudla okudliwayo ngokusebenzisa uhlelo lwePOMC oluphakathi. Izinzuzo ze-Lorcaserin HCL:
I-Lorcaserin HCL powder isetshenziselwa kanye nokudla nokuzivocavoca ukwelapha ukukhuluphala.
I-Lorcaserin HCL powder ngezinye izikhathi isetshenziselwa ukuphatha ukukhuluphala okungase kuhlobene nesifo sikashukela, i-cholesterol ephakeme noma ukucindezelwa kwegazi eliphezulu.
I-Lorcaserin HCL powder ngeke iphathe noma yiziphi izimo zempilo ezingaphansi (njengezifo zenhliziyo, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophezulu).
Kunconywe i-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Isilinganiso
I-Lorcaserin HCL powder ifika kwifomu yethebhulethi futhi ithathwa izikhathi ezingu-1-2 ngosuku, noma ngaphandle kokudla. I-Lorcaserin kumele isetshenziswe kanye nokudla okuncishisiwe khalori kanye nohlelo lokuzivocavoca.
Umthamo ophakanyisiwe we-lorcaserin hcl powder ngu-10 mg olawulwa ngomlomo kabili ngosuku. I-Lorcaserin ingathathwa ngaphandle kokudla. I-Lorcaserin hcl kufanele ishiywe ezigulini ezingaphumeleli ukufezekisa okungenani ukulahlekelwa kwe-5% ngesonto 12 kusukela lezi ziguli zingenakuthola ukulahleka kwesisindo esinomsoco nokuphathwa okuqhubekayo.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8)
I-Lorcaserin Hcl powder isetshenziselwa ukwelashwa kokuphathwa kwesisindo esingapheli kubantu abadala abane-index mass body (BMI) ye-30 noma enkulu (obese kakhulu) njengokungeza ekudleni okuncishisiwe-khalori nokuzivocavoca. Iphinde ivunyelwe ukusetshenziswa ngabantu abadala abane-BMI ye-27 noma enkulu (ngokweqile kakhulu) futhi okungenani abanesimo esisodwa esisondelene nesisindo esinjengesiphakamiso esiphakeme segazi (i-hypertension), noma i-cholesterol ephakeme (i-dyslipidemia). Nokho, kungase kube neminye imiphumela emibi. Njengezansi:
▲ TImiphumela emibi kakhulu:
-Hyglycemia (ushukela wegazi ophansi).
▲ Ezinye imiphumela ezingavamile kodwa ezibi kakhulu ezihambisana ne-lorcaserin zihlanganisa:
-Thola izinkinga ze-valve,
-Changelela ukunakekelwa noma inkumbulo,
-Ukucindezeleka noma imicabango yokuzibulala,
-Ukwehla kwesibalo segazi, futhi
- Ukwanda kwe-hormone, i-prolactin.
I-Raw Palmitoylethanolamide powder (544-31-0)